ShwengweGames - Page 467 of 481 - News & Media
အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဒီအချက်တွေ လိုအပ်ပါတယ်
April 21, 2020 April 21, 2020 by Shwengwe Games
ခေတ်လူငယ်ပဲအသောက်စားတော့ရှိမှာပဲထိုစကားဟာလုံးဝမှားပါတယ်လူငယ်ဆိုတိုင်းသောက်စားနေကြရင်လူငယ်တိုင်းအကုန်သောက်စားသမားတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ “အစရှိတနောင်နောင်”တဲ့ အစမကောင်းရင်အနှောင်းမသေချာပါဘူး မိမိသူငယ်ချင်းဆေးသောက်တိုင်းမိမိကလိုက်သောက်စရာမလိုပါဘူးအတုခိုးသင့်,မသင့်စဉ်းစားပါ။
မိမိချေးနဲစာနဲ့ရလာတဲ့ငွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူပဲရလာတဲ့ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးထားပါသုံးပြီးလို့ပိုလာတာကိုမစုပါနဲ့မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမံချက်တိုင်းစုလို့ပိုလာတဲ့ငွေကိုသုံးပါပိုက်ဆံမရှိတဲ့အခါကျန်တာတွေအဝေးကြီးစဉ်းစားမနေနဲ့မိမိအမြဲတမ်းလိုလိုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့သူဟာမိမိအဆင်မပြေတဲ့အခါသူဟာမိမိပေါ်ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲ(သူငယ်ချင်းတိုင်းမဟုတ်ပါအများစုဖြစ်တတ်ကြပါတယ်)ကြုံဖူးသူတိုင်းသိကြမှာပါ နောက် တစ်ခုကမိမိရဲ့မိသားစုထဲမှာငွေမရှိတဲ့သားသမီးဟာမောင်နှမညီအစ်ကိုတွေမိမိဘယ်လိုဆက်ဆံလဲ?ဒါတွေကိုသိနေရင် မိမိငွေတစ်ခါသုံးဖို့ငွေစက္ကူတစ်ရွတ်ထုတ်တိုင်းအမှတ်ရပါ။
“စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေ”တဲ့ မိမိလမ်းမှားနေရင်စာအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမိမိဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ကိုက်ညီသောစာသားတွေ့ခဲ့ရင်ရှေ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုအဲဒီစာပေတွေကမိမိကိုပြန် လည်လမ်းပြပေးမှာပါအတွေ့မရှိသော် လည်းစာပေရဲ့ဗဟုသုတကြောင့်လွယ်လင့်တကူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိအားလပ်နေတဲ့အချိန်တွေကိုမဖြုန်းတီးပဲစာဖတ်ပါ။
အပြောအဆိုသိမ်မွေ့ခြင်းဟာမိမိလုပ် ငန်းတွက်မိတ်ဆွေတိုးပွား၍လုပ်ငန်းကိုလဲပိုမိုဖြစ်မြောက်စေပါတယ်ဥပမာ=ငါ့ညီရေအကိုတို့ဒီပစ္စည်းလေးဝယ်တုန်းကဘယ်လောက်ပေးရတယ်အကိုတို့ကအမြတ်ကိုဘယ်လောက်လေးပဲတင်ထားတာပါဒီလိုအေး အေးဆေးဆေးလေးသိမ်မွေ့စွာရှင်းပြခြင်းအားဖြင့်မိမိပစ္စည်းဟာအမြန်ရောင်းရစေပါတယ် အဲလိုမဟုတ်ပဲ “ငါဝယ်တာတောင်ဘယ် လောက်ပေးရတာမင့်ကိုငါကဒီစျေးနဲ့ပေးရမယ် မင့်ကြိုက်ရင်ဝယ်မဝယ်ချင်နေ”ဒီလိုပြောတာနဲ့အင်မတန်မှကွာခြားလှပါတယ် ထို့ကြောင့် မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအမြန်ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အပြောအဆိုသိမ်မွေ့ခြင်းဟာလဲအရာရောက်ပါတယ်။
မိမိလုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်တဲ့ချက်ချင်းထလုပ်လိုက်ပါတော်ကြာမှခဏနေမှဆိုတဲ့ပုံစံကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ အဲလိုလုပ်ခြင်းဟာမိမိရဲ့ပန်းတိုင်ကို မြန်မြန်မလိုချင်ပါဘူးလို့ငြင်းပယ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲအလုပ်တစ်ခုဘယ်တော့မှအကြွေးမထားပါနဲ့မိမိမလုပ်ပဲထိုင်နေတဲ့အချိန်တွေကဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာတော်ကြာမှဆိုပြီးပြစ်ထားလိုက်တဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ပါမှထလုပ်ရင်းအချိန်တွေမလောက်ငှပဲနောက်အလုပ်တွေကိုနောက်နှေးစေပါတယ် လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်မြန်မြန်သာထလုပ်လိုက်ပါ။
အလုပ်ရှင်ဟာလဲအလုပ်သမား- အလုပ် သမားဟာလဲအလုပ်ရှင်ပါပဲရောင်းဝယ်သူအသံတူနေမှသာလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာစည်းလုံးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် အလုပ်သမားဟာလဲမိမိအလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို မိမိကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းသဖွယ်စိတ်ထဲထင်မှတ်ကာသစ္စာရှိပါအလုပ်ရှင်ဟာလဲ မိမိအလုပ်သမားတွေဟာငါရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ခြင်းတွက်ထောက်ပံ့နေသောသူတွေပါလို့တစ်ဦးမေတ္တာတစ်ဦးသိလို့လက်ရှိအလုပ်ကိုသစ္စာရှိပါ။
“ဝီရိယအကျိုး စောစောနိုး -သူခိုးတုတ်နဲ့ပြစ်လတ္တံ”တဲ့ရှေးဆိုရိုးစကားရှိပါတယ် စောစောအိပ်ယာထပြီးအလုပ်လုပ်ခြင်းဟာမိမိပြောမပြတတ်လောက်အောင်အကျိုးကြီးမားလှပါတယ်ဥပမာ၁နာရီနားရမဲ့ဟာ၁၀နာရီနဲ့နားရပါတယ်အချိန်တွေကိုပိုမိုရစေပါတယ်စောစောထပြီးအလုပ်လုပ်တော့ နောက်ဆုံးပြောရရင်တစ်ခြားသူတွေနေပူတာလောက်တောင်မခံရပါဘူးထို့ကြောင့်အိပ်ယာစောစောထပြီးအလုပ်ကိုကြိုးစားကြပါ။
မိမိအောင်မြင်မှု့ရခြင်းတွက်ရည်မှန်း ချက်ထားပါဥပမာ-ငါခုအသက်၂၀ရှိပြီ ဒီနှစ်ကိုငါဆိုင်ကယ်တစ်စီးပိုင်ဆိုင်ရမယ် နောက်၂နှစ်နေရင်ငါ့မှာကိုယ်ပိုင်အလုပ်လေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရမယ် ၃နှစ်ကြာရင်ငါမြေကွက်တစ်ကွက်ပိုင်ရမယ်ဒီ၆နှစ်မှာငါ့ဘဝခုလက်ရှိဘဝနဲ့မတူပြောင်းလဲစေရမယ်လူ့လောကမှာအသက် ၃၀ကျော်သွားရင်လုပ်ရကိုင်ရတာတွေသိပ်အဆင်မပြေတော့ပါဘူးဒီလိုစီမံကိန်းချရည်မှန်းချက်ထားပါရည်မှန်းချက်မရှိရင်ဘာလုပ်လုပ်အလကားပါပဲရည်မှန်းချက်ရှိရှိအလုပ်ကိုလုပ်ကြပါ။
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်”အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ”ကျန်းမာခြင်းသည်လာဘ်တစ်တစ်ပါးပါပဲ၊မိမိကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါမိမိနေမကောင်းရင်အလုပ်လုပ်ဖို့မပြောနဲ့အုံးမိမိမဟုတ်တဲ့အခြားတစ်ယောက်ချက်ထားတဲ့ထမင်းဟင်းတောင်စားရတာအဆင်မပြေပါဘူးမိမိမှာဘယ်လောက်ပဲစည်းစိမ်တွေရှိနေပါ ကျန်းမာရေးမကောင်းရင်အပြည့်အဝခံစားပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးမိမိလုပ်ချင်သောအလုပ်မိမိလိုချင်သောရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရပါဘူး မိမိမကျန်းမာခြင်းဟာလိုချင်ပန်းတိုင်ကိုဟန့်တားစေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးဟာလဲမိမိအောင်မြင်မှု့ရခြင်းတွက်အ ရေးပါလှပါတယ်။
ဒီဟာကိုဖတ်မိသူတိုင်းအောင်မြင်သောစီးပွားရေးပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်ကျန်း မာချမ်းသာလို့ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ
မိန်းကလေးပရိတ်သတ်ထက် ယောင်္ကျားလေးဦးရေကပိုများနေလို့ အံ့ဩဘနန်းဖြစ်နေတဲ့ စိုင်းစိုင်း
April 21, 2020 by Shwengwe Games
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် စိုင်းစိုင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအားပေးမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေသိရှိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သို့ပေမဲ့လည်း ပရိသတ်တွေသိရှိထားသလို စိုင်းစိုင်းရဲ့ Fan တွေထဲမှာ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကထက် အမှန်တကယ်ကို ယောက်ျားလေးပရိသတ်ကပိုမိုများပြားနေခဲ့တာပါ။
စိုင်းစိုင်းကိုယ်တိုင်ကလည်း အခုလို သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေထဲမှာ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေထက် ယောက်ျားလေး ပရိသတ်တွေကပိုများနေတာကြောင့် အံ့သြနေခဲ့ရပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ယောက်ျားလေးပရိသတ်ကပိုများတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲဖော်ပြလာခဲ့တာပါ။ “အချက်အလက်တွေဆိုတာ တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ရှုပ်နေပြီးတော့ ကျနော့် Page insight ကို ဝင်ကြည့်လေ့မရှိပေမယ့် အခု Company တစ်ခုက demographic တောင်းလို့ ဝင်ကြည့်တော့မှ တချို့ Data တွေက ကိုယ်ထင်သလို မဟုတ်မှန်းသိလာတယ်။
ကျွန်တော့် Page မှာ Like လုပ်ထားတဲ့အရေအတွက် 8.8 M နဲ့ Follower 9.1 M ရှိနေပါတယ်။ အသက် (18 – 24) က အများဆုံးနဲ့ (25 – 34) က ဒုတိယအများဆုံးပါ။Follower စုစုပေါင်းရဲ့ 52% က အမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းက အများဆုံးနဲ့ ဒုတိယက ထိုင်း။ပြည်တွင်းမှာမှ ရန်ကုန်ရယ် မန္တလေးရယ် အများဆုံး” ဆိုပြီးဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ Sai Sai ရဲ့ Fan တွေထဲမှာ မိန်းကလေးပရိသတ်ထက် ယောက်ျားလေးပရိသတ်ကပိုများနေတာပါနော်။
မိန္းကေလးပရိတ္သတ္ထက္ ေယာက်ၤားေလးဦးေရကပိုမ်ားေနလို႔ အံ့ဩဘနန္းျဖစ္ေနတဲ့ စိုင္းစိုင္း
ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ စိုင္းစိုင္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြအားေပးမႈအမ်ားဆုံးရ႐ွိထားတဲ့ အႏုပညာ႐ွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ပရိသတ္ေတြသိ႐ွိထားၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ သို႔ေပမဲ့လည္း ပရိသတ္ေတြသိ႐ွိထားသလို စိုင္းစိုင္းရဲ႕ Fan ေတြထဲမွာ မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြကထက္ အမွန္တကယ္ကို ေယာက်္ားေလးပရိသတ္ကပိုမိုမ်ားျပားေနခဲ့တာပါ။
စိုင္းစိုင္းကိုယ္တိုင္ကလည္း အခုလို သူ႕ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြထဲမွာ မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြထက္ ေယာက်္ားေလး ပရိသတ္ေတြကပိုမ်ားေနတာေၾကာင့္ အံ့ၾသေနခဲ့ရၿပီး သူ႕ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ေယာက်္ားေလးပရိသတ္ကပိုမ်ားတဲ့အေၾကာင္းကို အခုလိုပဲေဖာ္ျပလာခဲ့တာပါ။ “အခ်က္အလက္ေတြဆိုတာ ေတာ္ေတာ္စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတာပဲ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္႐ႈပ္ေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ့္ Page insight ကို ဝင္ၾကည့္ေလ့မ႐ွိေပမယ့္ အခု Company တစ္ခုက demographic ေတာင္းလို႔ ဝင္ၾကည့္ေတာ့မွ တခ်ိဳ႕ Data ေတြက ကိုယ္ထင္သလို မဟုတ္မွန္းသိလာတယ္။
ကြၽန္ေတာ့္ Page မွာ Like လုပ္ထားတဲ့အေရအတြက္ 8.8 M နဲ႔ Follower 9.1 M ႐ွိေနပါတယ္။ အသက္ (18 – 24) က အမ်ားဆုံးနဲ႔ (25 – 34) က ဒုတိယအမ်ားဆုံးပါ။Follower စုစုေပါင္းရဲ႕ 52% က အမ်ိဳးသားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းက အမ်ားဆုံးနဲ႔ ဒုတိယက ထိုင္း။ျပည္တြင္းမွာမွ ရန္ကုန္ရယ္ မႏၲေလးရယ္ အမ်ားဆုံး” ဆိုၿပီးေဖာ္ျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ Sai Sai ရဲ႕ Fan ေတြထဲမွာ မိန္းကေလးပရိသတ္ထက္ ေယာက်္ားေလးပရိသတ္ကပိုမ်ားေနတာပါေနာ္။
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရသူတစ်ဦး Quarantine စင်တာထဲ ဝင်သောင်းကျန်းလို့ တရားရုံးက ထောင် ၃ လချလိုက်
နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရသူ တစ်ဦး Quarantine စင်တာထဲ ဝင်သောင်းကျန်းလို့ တရားရုံးက ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေပုဒ်မ (၁၈) နဲ့ ယမန်နေ့က ထောင် ၃ လချလိုက်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထောင် ၃ လချခံလိုက်ရသူဟာ အုတ်ဖိုကန်ဘောင် အကျဉ်းစခန်းကနေ လွတ်ငြိမ်းနဲ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ကျော်လင်းဆိုသူဖြစ်ပြီး သူက သူ့ဇနီးရှိရာ ခမိတ်ကျေးရွာ အလကကျောင်းထဲ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ COVID-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာထဲ အတင်းဝင် သောင်းကျန်းခဲ့တာလို့ တမူးခရိုင်ပြန်ဆက်ရုံးကနေ သိရပါတယ်။
တမူးခရိုင်ပြန်ဆက်ရုံးက ကျော်လင်းဟာ စင်တာထဲ ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခံဘဲ အတင်းဝင်ရောက်လာပြီး ဇနီးဖြစ်သူကို ဆံပင်ဆွဲ ဦးခေါင်းကို လက်သီးနဲ့ ထိုးကြိတ်တယ်လို့ ရဲမှတမ်းကိုကိုးကားပြီး ပြောဆိုထားပါတယ်။
ကျော်လင်းရဲ့ ဇနီးဟာ မန္တလေးမြို့ကနေ ခမိတ်ကျေးရွာကို ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့က ပြန်လည်ရောက်ရှိလာလို့ ခမိတ်ကျေးရွာထဲက Quarantine စင်တာမှာ စောင့်ကြည့်မှု ခံယူနေတာပါ။
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တမူးမြို့နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ကျန်းမာရေးမှူး(၁) ဦးတင့်လွင် က ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဥပဒေပုဒ်မ (၁၈)နဲ့ ဧပြီ (၂၀) ရက်နေ့ က တမူးမြို့နယ်တရားရုံးကို ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာမို့ တရားရုံးက အမှတ်(၉၈/၂၀၂၀)နဲ့ လက်ခံစစ်ဆေးခဲ့ပြီး တရားခံကျော်လင်းကို ဧပြီလ (၂၀)ရက်နေ့ ညနေ (၃)နာရီ အချိန်မှာ ထောင်ဒဏ် (၃)လ ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Credit ကိုမင်း/Myanmar Harp
တမူး၊ ဧပြီ ၂၁.
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရသူတစ္ဦး Quarantine စင္တာထဲ ဝင္ေသာင္းက်န္းလို႔ တရား႐ုံးက ေထာင္ ၃ လခ်လိုက္
ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရသူ တစ္ဦး Quarantine စင္တာထဲ ဝင္ေသာင္းက်န္းလို႔ တရား႐ုံးက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒပုဒ္မ (၁၈) နဲ႔ ယမန္ေန႔က ေထာင္ ၃ လခ်လိုက္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေထာင္ ၃ လခ်ခံလိုက္ရသူဟာ အုတ္ဖိုကန္ေဘာင္ အက်ဥ္းစခန္းကေန လြတ္ၿငိမ္းနဲ႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ေက်ာ္လင္းဆိုသူျဖစ္ၿပီး သူက သူ႕ဇနီး႐ွိရာ ခမိတ္ေက်း႐ြာ အလကေက်ာင္းထဲ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ COVID-19 ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးစင္တာထဲ အတင္းဝင္ ေသာင္းက်န္းခဲ့တာလို႔ တမူးခ႐ိုင္ျပန္ဆက္႐ုံးကေန သိရပါတယ္။
တမူးခ႐ိုင္ျပန္ဆက္႐ုံးက ေက်ာ္လင္းဟာ စင္တာထဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေတာင္းခံဘဲ အတင္းဝင္ေရာက္လာၿပီး ဇနီးျဖစ္သူကို ဆံပင္ဆြဲ ဦးေခါင္းကို လက္သီးနဲ႔ ထိုးႀကိတ္တယ္လို႔ ရဲမွတမ္းကိုကိုးကားၿပီး ေျပာဆိုထားပါတယ္။
ေက်ာ္လင္းရဲ႕ ဇနီးဟာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကေန ခမိတ္ေက်း႐ြာကို ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာလို႔ ခမိတ္ေက်း႐ြာထဲက Quarantine စင္တာမွာ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ခံယူေနတာပါ။
ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တမူးၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန က်န္းမာေရးမႉး(၁) ဦးတင့္လြင္ က ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး ဥပေဒပုဒ္မ (၁၈)နဲ႔ ဧၿပီ (၂၀) ရက္ေန႔ ကတမူးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးကို ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တာမို႔တရား႐ုံးက အမႈအမွတ္(၉၈/၂၀၂၀)နဲ႔ လက္ခံစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး တရားခံေက်ာ္လင္းကို ဧၿပီလ (၂၀)ရက္ေန႔ ညေန (၃)နာရီ အခ်ိန္မွာ ေထာင္ဒဏ္ (၃)လ ခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
တမူး၊ ဧၿပီ ၂၁.
ကိုဗစ် – ၁၉ ကူးစက်ခံလူနာအချို့တွင်ထူးဆန်းသည့် ဦးနှောက်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်မှု ပုံစံတစ်မျိုးတွေ့ရှိ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်ရှိဆေးရုံသို့ရောက်လာသောကိုဗစ်- ၁၉ ကူးစက်ခံလူနာများတွင်ထူးဆန်းသည့်ဦးနှောက် ကစဉ့်ကလျားဖြစ်မှု ပုံစံတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း ဧပြီ ၁၈ ရက်က နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြသည်။
ဖျားနာ၊ ချောင်းဆိုး၊အသက်ရှူကျပ်သည့်ရောဂါဝေဒနာများ ခံစားရ ပြီးနောက် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံလူနာအချို့တွင်ဦးနှောက်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်မှုနှင့်ဆိုင်သောလက္ခဏာများခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ယင်းအခြေအနေတွင်၎င်းတို့ဘယ်ရောက်နေသည်၊ဘယ်နှခုနှစ်သို့ ရောက်နေပြီဆိုသည်ကိုမသိတော့ကြောင်းအဆိုပါ သတင်းတွင်ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါအခြေအနေသည်သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင်နည်းနေသည့် လက္ခဏာနှင့်ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟုယူဆရမလိုဖြစ်သော်လည်းတချို့လူနာများတွင်အဆိုပါဦးနှောက်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ကာ ရှုပ်ထွေးမှု သည် အဆုတ်မည်သို့မည်ပုံခံစားနေရသည်ဆိုသည်နှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုဗစ် -၁၉ ကြောင့် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောစနစ်များအပေါ်ထိခိုက်မှု ရှိလာခြင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်းအင်န်ဝိုင်ယူလန်ဂွန်းဘရွတ်ကလင်းဆေးရုံ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူ ဂျနီဖာဖရွန်တီရာကပြောကြားလိုက်သည်။လူအများစုသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာကြောင်း။ယင်းအပြင်ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ပတ်သက်သည့် ပုံမှန်မဟုတ်သောသတင်း ပေးပို့မှုများကို ပိုမိုတွေ့ကြုံနိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကိုဗစ္ – ၁၉ ကူးစက္ခံလူနာအခ်ိဳ႕တြင္ထူးဆန္းသည့္ ဦးေႏွာက္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈ ပုံစံတစ္မ်ိဳးေတြ႕႐ွိ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႐ွိ ေဆး႐ုံသို႔ေရာက္လာေသာကိုဗစ္- ၁၉ ကူးစက္ခံလူနာမ်ားတြင္ထူးဆန္းသည့္ဦးေႏွာက္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈ ပုံစံတစ္ခုကိုေတြ႕႐ွိခဲ့ရေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၈ ရက္က ႏိုင္ငံတကာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ဖ်ားနာ၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊အသက္႐ွဴက်ပ္သည့္ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားရ ၿပီးေနာက္ ကိုဗစ္- ၁၉ ေရာဂါကူးစက္ခံလူနာအခ်ိဳ႕တြင္ဦးေႏွာက္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာလကၡဏာမ်ားခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ယင္းအေျခအေနတြင္၎တို႔ဘယ္ေရာက္ေနသည္၊ဘယ္ႏွခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေနၿပီဆိုသည္ကိုမသိေတာ့ေၾကာင္းအဆိုပါ သတင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။
အဆိုပါအေျခအေနသည္ ေသြးတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္နည္းေနသည့္ လကၡဏာႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ယူဆရမလိုျဖစ္ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕လူနာမ်ားတြင္ အဆိုပါ ဦးေႏွာက္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ကာ ႐ႈပ္ေထြးမႈ သည္ အဆုတ္မည္သို႔မည္ပုံခံစားေနရသည္ဆိုသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကိုဗစ္ -၁၉ ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ုံေၾကာစနစ္မ်ားအေပၚထိခိုက္မႈ ႐ွိလာျခင္းကိုစိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းအင္န္ဝိုင္ယူလန္ဂြန္းဘ႐ြတ္ကလင္း ေဆး႐ုံ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ုံေၾကာပါရဂူ ဂ်နီဖာဖ႐ြန္တီရာကေျပာၾကား လိုက္သည္။လူအမ်ားစုသည္ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာအသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာဝိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္လာေၾကာင္း။ယင္းအျပင္ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ သတင္း ေပးပို႔မႈမ်ားကို ပိုမိုေတြ႕ၾကဳံႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်းနာခြင်းများအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေမည့် သဘာဝ ဆေးနည်း
အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်းနာတဲ့ သူတွေအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေမည့် သဘာဝဆေးနည်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။အာသီးရောင်ခြင်းကို (Tonsillitis) လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဘာ့ကြောင့် အာသီးရောင်ပြီး လည်ချောင်းနာရသလဲဆိုတော့ကဆောင်း ကုန်နွေကူးပြီး နွေအခါရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အပူဓာတ်များလွန်ကဲပြီး အာသီးရောင်၍ လည် ချောင်းနာတတ်ပါတယ်။
အခုလို ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာ ရေများများသောက်ပါ။ဝမ်းမချုပ်ပါစေနှင့်အသီး အနှံ များများစားသုံးပေးပါ။အာသီးရောင်တဲ့လက္ခဏာဟာအစားအစာများ မြိုချပါကလည်ချောင်းအတွင်း ခံစားရခက်အောင်နာကျင်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့ ပထမအဦးဆုံးရေနွေးဖြူထဲသို့ အိမ်သုံးဆားတစ်ဇွန်းခန့်ထည့်၍ ရောမွှေပြီး၎င်းဆားရည်(Salt water)ဖြင့် ခေါင်းမော့၍အာခေါင်အတွင်းရောက်အောင်ပလုပ်ကျင်းပေးပါ။
ဒုတိယနည်းတစ်မျိုးကတော့သဘောင်္သီး နုနုထွတ်ထွတ်တစ်လုံးကိုအပင်မှ ခူး ဆွတ်၍ရေသန့်စင်အောင်ဆေးကြောပြီး အလုံးလိုက်ကြေညှက်အောင်ဝါးစားပြီး မြိုချလိုက်ပါ။အထက်ပါဖော်ပြထားတဲ့ (၂)ချက်ကို ချက်ချင်းပြုလုပ်ပါ။တတိယ နောက်ဆုံးနည်းကတော့ (ပျားရည်စစ် စစ်+ဂျင်း(ချင်း) နှင့် သံပရာသီး (သို့) ရှောက်သီး)
ဂျင်းကို ပါးပါးလှပ်လှပ်လှီးပါသံပရားသီးကိုအစေ့ အခွံပါအောင်ကွင်းလှီးပါ။ ဤ (၂)မျိုးကိုသန့်စင်သောပုလင်းဗူးထဲ၌ရောထည့်၍ပျားရည်စစ်စစ်ကိုဂျင်းအဖ့တ် သံပရာသီးအဖတ်မြုပ်အောင်ထည့်၍တစ်ပတ်ခန့်ကြာအောင် လေလုံအောင် အဖုံးပိတ်ထားလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်ခန့်ကြာသော်၎င်းအဖတ်များနှင့်ပျားရည်ကို နေ့/ည ပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် (Tonsillitis)လို့ခေါ်တဲ့အာသီးရောင်ရောဂါကိုလုံးဝအရှင်းပျောက်ကင်းစေပါသည်။ခဏ ခဏ ဖြစ်တတ်သူတွေက ဒီဆေးနည်းအတိုင်းဖော်စပ်ထားပြီး အိမ်မှာဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
Credit – Win Min Phyo(ဘဝခါးခါး)
အာသီးေရာင္ၿပီး လည္ေခ်ာင္းျခင္းမ်ားအတြက္ နာရီပိုင္းအတြင္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ သဘာဝ ေဆးနည္း
အာသီးေရာင္ၿပီး လည္ေခ်ာင္းနာတဲ့ သူေတြအတြက္ နာရီပိုင္းအတြင္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစမည့္ သဘာဝ ေဆးနည္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အာသီးေရာင္ျခင္းကို (Tonsillitis)လို႔ ေခၚဆိုပါတယ္။ဘာ့ေၾကာင့္ အာသီးေရာင္ၿပီး လည္ေခ်ာင္းနာရသလဲဆိုေတာ့ကေဆာင္း ကုန္ေႏြကူးၿပီး ေႏြအခါေရာက္ၿပီဆိုတာနဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အပူဓာတ္မ်ားလြန္ကဲၿပီး အာသီးေရာင္၍ လည္ ေခ်ာင္းနာတတ္ပါတယ္။
အခုလို ပူျပင္းတဲ့ရာသီမွာ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ဝမ္းမခ်ဳပ္ပါေစႏွင့္အသီး အႏွံ မ်ားမ်ားစားသုံးေပးပါ။အာသီးေရာင္တဲ့လကၡဏာဟာအစားအစာမ်ား ၿမိဳခ်ပါကလည္ေခ်ာင္းအတြင္း ခံစားရခက္ေအာင္နာက်င္ပါတယ္။ဒီလိုျဖစ္ေနၿပီဆိုတာနဲ႕ ပထမအဦးဆုံးေရေႏြးျဖဴထဲသို႔ အိမ္သုံးဆားတစ္ဇြန္းခန႔္ထည့္၍ ေရာေမႊၿပီး၎ဆားရည္(Salt water)ျဖင့္ ေခါင္းေမာ့၍အာေခါင္အတြင္းေရာက္ေအာင္ပလုပ္က်င္းေပးပါ။
ဒုတိယနည္းတစ္မ်ိဳးကေတာ့သေဘာသႌး ႏုႏုထြတ္ထြတ္တစ္လုံးကိုအပင္မွ ခူး ဆြတ္၍ေရသန႔္စင္ေအာင္ေဆးေၾကာၿပီး အလုံးလိုက္ေၾကညွက္ေအာင္ဝါးစားၿပီး ၿမိဳခ်လိဳက္ပါ။အထက္ပါေဖာ္ျပထားတဲ့ (၂)ခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ပါ။တတိယ ေနာက္ဆုံးနည္းကေတာ့ (ပ်ားရည္စစ္ စစ္+ဂ်င္း(ခ်င္း) ႏွင့္ သံပရာသီး (သို႔) ေရွာက္သီး)
ဂ်င္းကို ပါးပါးလွပ္လွပ္လွီးပါသံပရားသီးကိုအေစ့ အခြံပါေအာင္ကြင္းလွီးပါ။ ဤ (၂)မ်ိဳးကိုသန႔္စင္ေသာပုလင္းဗူးထဲ၌ေရာထည့္၍ပ်ားရည္စစ္စစ္ကိုဂ်င္းအဖ့တ္ သံပရာသီးအဖတ္ျမဳပ္ေအာင္ထည့္၍တစ္ပတ္ခန႔္ၾကာေအာင္ ေလလုံေအာင္ အဖုံးပိတ္ထားလိုက္ပါ။ တစ္ပတ္ခန႔္ၾကာေသာ္၎အဖတ္မ်ားႏွင့္ပ်ားရည္ကို ေန႕/ည ပုံမွန္စားသုံးေပးျခင္းျဖင့္ (Tonsillitis)လို႔ေခၚတဲ့အာသီးေရာင္ေရာဂါကိုလုံးဝအရွင္းေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ခဏ ခဏ ျဖစ္တတ္သူေတြက ဒီေဆးနည္းအတိုင္းေဖာ္စပ္ထားၿပီး အိမ္မွာေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။
ဖေ့စ်ဘွတ်အသိမှတ်ပြု blue markလေးရအောင် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ယုန်လေးကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တဲ့ဆုပန်ထွာ
နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆုပန်ထွာကတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ဆုပန်ထွာရဲ့ဖေ့ဘွက်ခ်အကောင့်လေးက နိုင်ငံတော်ရဲ့အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့Blue Mark လေးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ခုလို Blue Mark လေးရသွားအောင်ကူညီပေးတဲ့ယုန်လေးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပြီး နိုင်ငံတော်ကအသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့Blue Mark လေးကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိကြောင်းကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကိုတော့ “မရပါဘူးဆိုမှပိုလိုချင်မိတဲ့ Blue Markရတဲ့‌နေ့လေး သူများတွေ Blue Mark လေးတွေမြင်ရတော့ကိုယ်လည်းလိုချင်မိပြန်ရော။ လုပ်ကလည်းမလုပ်တတ်။ လုပ်တတ်တဲ့သူအရင်လုပ်ခိုင်းကြည့်တော့လည်းမရ။ ဘာဖြစ်လို့လုပ်မရမှန်းလည်းကိုယ်တွေကနားမလည်၊မသိနဲ့လေ။ယုန်လေးဆီ Blue Mark လေးတွေ့တော့မောင်လေး Yone Lay နင့်လိုငါ့ကိုအပြာချစ်လေးလုပ်ပေးဆိုတော့။ဗျာ…အစ်မကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူး။ညီမလေးဆုမြတ်ခိုင်လုပ်ပေးတာ။ သူ့ပြောပေးမယ်လေတဲ့။ကိုယ်ကသူလုပ်တတ်တယ်ထင်တာ။ အစ်မကျွန်တော့်အထင်မကြီးနဲ့တဲ့။ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကမသိတာရယ်မတတ်တာရယ်အတူတူပဲမို့။
ငါနဲ့ကသိမှမသိတာ နင်ပြောပေးဆိုတော့သူ့အစ်မကိုပြောပေးရှာတယ်။ညီမလေးနဲ့ခင်သွားပြီး အစအဆုံးလုပ်ပေးရှာတယ်။ ခု Blue Mark လေးရသွားတော့ပျော်မိတာလေ။ရက်ပိုင်းလေးနဲ့ Blue Mark ရအောင်လုပ်ပေးတာ ညီမလေးတော်လိုက်တာလို့ချီးကျူးမိပါတယ်။ယုန်လေးရော၊ညီမလေးဆုမြတ်ခိုင်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့”လို့ရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ေဖ့စ္ဘြတ္အသိမွတ္ျပဳ blue markေလးရေအာင္ ကူညီေပးခဲ့တဲ့ ယုန္ေလးကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာလိုက္တဲ့ဆုပန္ထြာ
ႏိုင္ငံေက်ာ္သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ဆုပန္ထြာကေတာ့ ပရိသတ္အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရ႐ွိထားတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒီေန႔မွာေတာ့ဆုပန္ထြာရဲ႕ေဖ့ဘြက္ခ္အေကာင့္ေလးက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔Blue Mark ေလးကိုရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ခုလို Blue Mark ေလးရသြားေအာင္ကူညီေပးတဲ့ယုန္ေလးကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကအသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔Blue Mark ေလးကိုရ႐ွိခဲ့တဲ့အတြက္ဝမ္းသာမိေၾကာင္းကို သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္မွာတင္ထားခဲ့ပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ “မရပါဘူးဆိုမွပိုလိုခ်င္မိတဲ့ Blue Markရတဲ့‌ေန႔ေလး သူမ်ားေတြ Blue Mark ေလးေတြျမင္ရေတာ့ကိုယ္လည္းလိုခ်င္မိျပန္ေရာ။ လုပ္ကလည္းမလုပ္တတ္။ လုပ္တတ္တဲ့သူအရင္လုပ္ခိုင္းၾကည့္ေတာ့လည္းမရ။ ဘာျဖစ္လို႔လုပ္မရမွန္းလည္းကိုယ္ေတြကနားမလည္၊မသိနဲ႔ေလ။ယုန္ေလးဆီ Blue Mark ေလးေတြ႕ေတာ့ေမာင္ေလး Yone Lay နင့္လိုငါ့ကိုအျပာခ်စ္ေလးလုပ္ေပးဆိုေတာ့။ဗ်ာ…အစ္မကြၽန္ေတာ္မလုပ္တတ္ဘူး။ညီမေလးဆုျမတ္ခိုင္လုပ္ေပးတာ။ သူ႕ေျပာေပးမယ္ေလတဲ့။ကိုယ္ကသူလုပ္တတ္တယ္ထင္တာ။ အစ္မကြၽန္ေတာ္႕အထင္မႀကီးနဲ႔တဲ့။ သူနဲ႔ကိုယ္နဲ႔ကမသိတာရယ္မတတ္တာရယ္အတူတူပဲမို႔။
ငါနဲ႔ကသိမွမသိတာ နင္ေျပာေပးဆိုေတာ့သူ႕အစ္မကိုေျပာေပး႐ွာတယ္။ညီမေလးနဲ႔ခင္သြားၿပီး အစအဆုံးလုပ္ေပး႐ွာတယ္။ ခု Blue Mark ေလးရသြားေတာ့ေပ်ာ္မိတာေလ။ရက္ပိုင္းေလးနဲ႔ Blue Mark ရေအာင္လုပ္ေပးတာ ညီမေလးေတာ္လိုက္တာလို႔ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။ယုန္ေလးေရာ၊ညီမေလးဆုျမတ္ခိုင္ေရာေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔”လို႔ေရးသားေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၁၁:၀၀)နာရီ
April 20, 2020 by Shwengwe Games
၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) ၏ (၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ (ဒုတိယအသုတ်) စစ်ဆေးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၄၆) ခုအနက် (၂) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာတွင် COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိ (တွေ့ရှိ) ပြီး ကျန် (၂၄၄) ဦးတွင် COVID-19 ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိ (မတွေ့ရှိ) ပါ။
၂။ အဆိုပါ လူနာသစ် (၂) ဦးကို သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံများသို့ လွှဲပြောင်း၍ သီးခြားထားရှိကုသမှု ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ (၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ COVID-19 ရောဂါအတွက် (ပထမအသုတ် + ဒုတိယအသုတ်) ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွင် တွေ့ရှိခဲ့သော လူနာသစ် စုစုပေါင်း (၈) ဦးရှိပါသည်။ ကျန် (၄၁၉) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိပါ။
၄။ (၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၁၁:၀၀)နာရီ အချိန်အထိ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း (၁၁၉) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
၅။ ယနေ့ည ထပ်မံထုတ်ပြန်ရန် ဓာတ်ခွဲအဖြေသတင်းများ မရှိတော့ပါ။
COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း(၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ည (၁၁:၀၀)နာရီ
၁။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) ၏ (၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ (ဒုတိယအသုတ္) စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၄၆) ခုအနက္ (၂) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ၿပီး က်န္ (၂၄၄) ဦးတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိ (မေတြ႕ရွိ) ပါ။
၂။ အဆိုပါ လူနာသစ္ (၂) ဦးကို သက္ဆိုင္ရာေဆး႐ုံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း၍ သီးျခားထားရွိကုသမႈ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ (၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ COVID-19 ေရာဂါအတြက္ (ပထမအသုတ္ + ဒုတိယအသုတ္) ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ လူနာသစ္ စုစုေပါင္း (၈) ဦးရွိပါသည္။ က်န္ (၄၁၉) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိပါ။
၄။ (၂၀-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႕၊ ည (၁၁:၀၀)နာရီ အခ်ိန္အထိ COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ စုစုေပါင္း (၁၁၉) ဦးရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။
၅။ ယေန႕ည ထပ္မံထုတ္ျပန္ရန္ ဓာတ္ခြဲအေျဖသတင္းမ်ား မရွိေတာ့ပါ။
မီတာခသွင်းရန် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် လဲကျသွားသည့် အမျိုးသား ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ သေဆုံး
မီတာခသွင်းရန်တန်းစီနေစဉ် ရုတ်တရုက်မူးလဲသွားသည့် အမျိုးသားတစ်ဦး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် သေဆုံးသွားသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ဗားကရာလမ်းပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်မီတာရုံး၌ မီတာဆောင်ရန်အတွက် ဧပြီလ ၂၀ ရက်၊ ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေကြသူများ၌ အသက် ၇၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး ရုတ်တရက်လဲကျသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းအတွက်ကြောင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ကျန်း မာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် အားမာန် လူငယ်ပရဟိတ အဖွဲ့တို့မှ ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီးသို့သယ်ဆောင်ပေးပို့ခဲ့သော်လည်း နာရီပိုင်းအတွင်း အဆိုပါအမျိုးသား သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဘာရောဂါနဲ့မှသေဆုံးသွားတဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သူကအသက်ကလည်းကြီးနေပြီ၊ ပြီးတော့ လူကြီးရောဂါအခံကလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါအပြင် အရမ်းပူတဲ့အခါမှာ ရုတ်တရက်မူးလဲသွားတာကနေ ဆေးရုံအရောက် နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ သေဆုံးသွားတာပါ” ဟု အားမန် လူငယ်ပရဟိတ အဖွဲ့မှ တာ၀န်ရှိသူတစ်ဦးက အကုန်သိသတင်းဌာသို့ ပြောသည်။
သေဆုံးသူမှာ ကျွန်းတော တောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းသာလမ်းရှိတိုက်ခန်း၌ နေထိုင်သည့် ရဲအုပ်အငြိမ်းစား ဦးကျော်ဆန်းဝင်း(၇၄)နှစ်ဖြစ်ပြီး သွေးတိုး၊ ဆီးချို နှင့်ကျောက်ကပ် ရောဂါအခံရှိသူဖြစ်ကြောင်း မီတာခဆောင်ရန်တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် အမောဖောက်ကာ ယခုလိုသေဆုံးသွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့် တာ၀န်ရှိသူများက ဓမ္မတာအတိုင်းသေဆုံးခြင်းဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးကာ လိုအပ်သည်များဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဓာတ်ပုံ – U Bo Bo Oo
ကလေးမြို့ Case 88 ရဲ့ မိသားစုဝင်မှ စုစုပေါင်း ၄ ဦးတွင် ပိုးတွေ့ခဲ့ပြီးသားအကြီးဆုံးမှာ ကားစပယ်ရာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်
ကလေးမြို့ Case 88 ရဲ့ မိသားစုမှ အတူနေ ခင်ပွန်း၊ သားငယ် ၂ ၊ သမီးငယ် ၁ ၊ စုစုပေါင်း ၄ ဦးဟာ positive အဖြေထွက်လာတယ်
case 88 ၌ မိသားစု ၆ ဦးရှိရာ သမီးအကြီးဆုံးမှာ သူ့အိမ်ထောင်နှင့်သူ အိမ်ခွဲအဖြစ် ခိုင်ကမ်းမြို့၌ နေထိုင်ပြီး case 88 မိသားစုနှင့်အတူ မနေထိုင်ပါ
ကလေးမြို့မှ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ပေးပို့သော ဓါတ်ခွဲနမူနာ ၈ ဦးရှိရာ ဒီနေ့ ၂၀ ဧပြီ ၌ ၄ ဦးမှာ positive လူနာအဖြစ် ထွက်လာပါတယ်
Lock down လုပ်ထားတဲ့ case 88 ၏ နေအိမ်ဝန်းကျင်ရှိ နေထိုင်ကြသော သားငယ်၊ သမီးငယ်လေးများအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်
သားအကြီးဆုံး case 115 မှာ ကားစပယ်ယာအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ၏ဆရာ ကားဒရိုင်ဘာအားမနက်ဖြန်၌ Q ဝင်ရန် သွားရောက်ခေါ်ဆောင်ကြဦးမည် ဖြစ်ပါတယ်
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ case 114 အား သူ၏အမည်နှင့် အလုပ်အကိုင်တွေကို ဖေါ်ပြချင်ပါတယ်
သို့မှသာ သူနှင့်ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေသော သူ့မိတ်ဆွေများဟာ Q ဝင်ကြရမှာ ဖြစ်တယ်
မနက်ဖြန်၌ case 114 ၏ ရာဇဝင်အား လိုက်ယူကြတော့မှာ ဖြစ်တယ်
Source Ba Kyue
ကေလးၿမိဳ႕ Case 88 ရဲ႕ မိသားစုဝင္မွ စု စုေပါင္း ၄ ဦးတြင္ ပိုးေတြ႕ခဲ့ၿပီးသားအ ႀကီးဆုံးမွာ ကားစပယ္ရာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္
ကေလးၿမိဳ႕ Case 88 ရဲ႕ မိသားစုမွ အတူေန ခင္ပြန္း၊ သားငယ္ ၂ ၊ သမီးငယ္ ၁ ၊ စုစုေပါင္း ၄ ဦးဟာ positive အေျဖထြက္လာတယ္
case 88 ၌ မိသားစု ၆ ဦးရွိရာ သမီးအႀကီးဆုံးမွာ သူ႕အိမ္ေထာင္ႏွင့္သူ အိမ္ခြဲအျဖစ္ ခိုင္ကမ္းၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္ၿပီး case 88 မိသားစုႏွင့္အတူ မေနထိုင္ပါ
ကေလးၿမိဳ႕မွ ၁၈ ဧၿပီ ၂၀၂၀ ရက္ေန႕မွ ေပးပို႔ေသာ ဓါတ္ခြဲနမူနာ ၈ ဦးရွိရာ ဒီေန႕ ၂၀ ဧၿပီ ၌ ၄ ဦးမွာ positive လူနာအျဖစ္ ထြက္လာပါတယ္
Lock down လုပ္ထားတဲ့ case 88 ၏ ေနအိမ္ဝန္းက်င္ရွိ ေနထိုင္ၾကေသာ သားငယ္၊ သမီးငယ္ေလးမ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္
သားအႀကီးဆုံး case 115 မွာ ကားစပယ္ယာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ဆရာ ကားဒရိုင္ဘာအားမနက္ျဖန္၌ Q ဝင္ရန္ သြားေရာက္ေခၚေဆာင္ၾကဦးမည္ ျဖစ္ပါတယ္
ခင္ပြန္းျဖစ္သူ case 114 အား သူ၏အမည္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ေဖၚျပခ်င္ပါတယ္
သို႔မွသာ သူႏွင့္ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနေသာ သူ႕မိတ္ေဆြမ်ားဟာ Q ဝင္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္
မနက္ျဖန္၌ case 114 ၏ ရာဇဝင္အား လိုက္ယူၾကေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္
Covid-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ မြန်မာနိုင်ငံအား ဒေါ်လာသန်း(၅၀)ထောက်ပံ့
မနေ့က တချို့က လာပြောကြတယ်။ အစိုးရက ညံ့လို့ ဟိုဟာ မတင်နိုင်လို့ ဒီဟာမတင်နိုင်လို့ World Bank က အကူအညီထောက်ပံ့ငွေမရဘူးပေါ့။ အိန္ဒိယလို နိုင်ငံတောင် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံရတယ်။လာအိုက ၁၈ သန်းရတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက သန်း ၁၀၀။သူတို့ရတာက ၁ပတ် နီးပါးရှိပီ။လူဦးရေအချိုးအစားနဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေနဲ့ သေချာတွက်ချက်ပီး ပေးတာပေါ့။စုံစမ်းကြည့်တော့မြန်မာနိုင်ငံကလဲ တင်တော့ထားတယ်။ ရမလာသေးဘူးပေါ့။စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာ ဒီငွေကြေးကလဲအများကြီး အကူအညီဖြစ်စေတယ်လေ။ ဒီနေ့ညနေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက် COVID အရေးပေါ်တိုက်ဖျက်ရေးရန်ပုံငွေအဖြစ်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ကြီးတောင်ချပေးလိုက်တာကို ကြားလိုက်ရတယ်။တကယ်ကို ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။အစိုးရရဲ့ တင်ပြတဲ့ Plan ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် ရရှိလာတဲ့ အကျိုးပါပဲ။ နောက်ထပ် ကြိုးစားမှုကြီးတရပ်ပါ။
အဲဒီငွေတွေနဲ့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေကဗဟိုအဆင့် ဆေးရုံကြီး ၈ခု၊တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အဆင့် ဆေးရုံ ၄၃ ခုကို အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပီ။နောက်ပီး ICU တွေကို အဆင့်မြှင့်ဖို့လဲပါတယ်။ လက်ရှိမှာလဲ World Bank Project တွေကရန်ပုံငွေတွေကို COVID တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ယူသုံးနေရပါတယ်။ဒါ့အပြင် ရှေ့ဆက်ပီးတော့လဲ ၁၅လအတွင်းဆင်းရဲတဲ့လူတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပံ့ပိုးဖို့နဲ့ နိုင်ငံစီးပွားရေးထူထောင်ဖို့ ရန်ပုံငွေတွေ ဆက်ပေးသွားဖို့လဲရှိပါသတဲ့။ကျနော်တို့လို ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကတော့ ၀မ်းသာစရာပါပဲ။ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့မိသားစုထဲ နေထိုင်ဖို့ကဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိသာလှပါတယ်။
COVID ကတော့ လက်ရှိမှာ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပမှာ ဖြစ်နေပေမယ့် မကြာခင် အာဖရိကမှာ ဗဟိုချက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ WHO က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အာဖရိကဒေသကိုလဲ ထောက်ပံ့နေပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှမှာတော့စင်ကာပူက အင်ဒိုကို ကျော်ပီး ပိုးကူးစက်သူအများဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့ လက်ရှိမှာ ၁၁၇ ဦး ကူးစက်ခံထားရပါတယ်။ဒီနေ့ ကူးစက်ခံရသူတွေထဲမှာ ကလေးမြို့ကပဲ ၄ဦးပါလို့ ကလေးမြို့ကို ၀န်းရံရဦးမှာပါ။လက်ရှိအထိ ပိုးမတွေ့တော့တဲ့လူနာဦးရေကလဲ ၉ဦးအထိ ရှိလာသလို ပိုးကူးစက်သူဦးရေကလဲအများကြီးထပ်တိုးမလာသေးပါဘူး။
လက်ရှိမှာကမ္ဘာတခုလုံးက ဒီရောဂါရဲ့ သဘောတရားကို တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာကြသလိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ဖို့လဲ ကြိုးစားလာကြပါပီ။စီးပွားရေးနလန်ထဖို့လဲ Plan တွေ ဆွဲကုန်ကြပါပီ။မြန်မာပြည်မှာလဲဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေ အများကြီးတိုးလုပ်နိုင်ဖို့ရှိလာတာရယ်၊အခုလို ဆေးရုံတွေ အဆင့်မြှင့်ဖို့ ငွေကြေးတွေရရှိလာပီဖြစ်တာကြောင့်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာ ပိုပီး လျင်မြန်ကောင်းမွန်လာတော့မှာပါ။ World Bank ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။လိုအပ်နေတဲ့အချိန် မျှော်နေတုန်းမှာ ရလာလို့ ပိုကျေနပ်ရပါတယ်။ Fighting Myanmar.
Credit Dr Nay Thway
မေန႔က တခ်ိဳ႕က လာေျပာၾကတယ္။ အစိုးရက ညံ့လို႔ ဟိုဟာ မတင္ႏိုင္လို႔ဒီဟာမတင္ႏိုင္လို႔ World Bank က အကူအညီေထာက္ပံ့ေငြမရဘူးေပါ့။ အိႏၵိယလို ႏိုင္ငံေတာင္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံရတယ္။လာအိုက ၁၈ သန္းရတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွက သန္း ၁၀၀။သူတို႔ရတာက ၁ပတ္ နီးပါး႐ွိပီ။လူဦးေရအခ်ိဳးအစားနဲ႔တိုင္းျပည္အေျခအေနနဲ႔ ေသခ်ာတြက္ခ်က္ပီး ေပးတာေပါ့။စုံစမ္းၾကည့္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကလဲ တင္ေတာ့ထားတယ္။ရမလာေသးဘူးေပါ့။စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ဒီေငြေၾကးကလဲအမ်ားႀကီးအကူအညီျဖစ္ေစတယ္ေလ။ ဒီေန႔ညေနမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ COVID အေရးေပၚတိုက္ဖ်က္ေရး ရန္ပုံေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ႀကီးေတာင္ခ်ေပးလိုက္တာကို ၾကားလိုက္ရတယ္။တကယ္ကို ေပ်ာ္႐ႊင္ရပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ တင္ျပတဲ့ Plan ေကာင္းမြန္တဲ့အတြက္ ရ႐ွိလာတဲ့ အက်ိဳးပါပဲ။ ေနာက္ထပ္ ႀကိဳးစားမႈႀကီးတရပ္ပါ။
အဲဒီေငြေတြနဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက ဗဟိုအဆင့္ ေဆး႐ုံႀကီး ၈ခု၊တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆး႐ုံ ၄၃ ခုကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပီ။ ေနာက္ပီး ICU ေတြကိုအဆင့္ျမႇင့္ဖို႔လဲပါတယ္။လက္႐ွိမွာလဲ World Bank Project ေတြက ရန္ပုံေငြေတြကို COVID တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ယူသုံးေနရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ေ႐ွ႕ဆက္ပီးေတာ့လဲ ၁၅လအတြင္းဆင္းရဲတဲ့လူေတြကို ေထာက္ပံ့ဖို႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုပံ့ပိုးဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးထူေထာင္ဖို႔ ရန္ပုံေငြေတြ ဆက္ေပးသြားဖို႔လဲ ႐ွိပါသတဲ့။ က်ေနာ္တို႔လိုဆင္းရဲတဲ့တိုင္းျပည္အတြက္ကေတာ့ ၀မ္းသာစရာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကမ႓ာ့မိသားစုထဲ ေနထိုင္ဖို႔က ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ သိသာလွပါတယ္။
COVID ကေတာ့ လက္႐ွိမွာ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပမွာ ျဖစ္ေနေပမယ့္ မၾကာခင္ အာဖရိကမွာ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ WHO က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အာဖရိကေဒသကိုလဲ ေထာက္ပံ့ေနပါတယ္။ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွမွာေတာ့ စင္ကာပူက အင္ဒိုကို ေက်ာ္ပီး ပိုးကူးစက္သူ အမ်ားဆုံးျဖစ္လာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ လက္႐ွိမွာ ၁၁၇ ဦး ကူးစက္ခံထားရပါတယ္။ ဒီေန႔ ကူးစက္ခံရသူေတြထဲမွာ ကေလးၿမိဳ႕ကပဲ ၄ဦးပါလို႔ ကေလးၿမိဳ႕ကို ၀န္းရံရဦးမွာပါ။ လက္႐ွိအထိ ပိုးမေတြ႕ေတာ့တဲ့ လူနာဦးေရကလဲ ၉ဦးအထိ ႐ွိလာသလို ပိုးကူးစက္သူဦးေရကလဲ အမ်ားႀကီးထပ္တိုးမလာေသးပါဘူး။
လက္႐ွိမွာ ကမ႓ာတခုလုံးက ဒီေရာဂါရဲ႕ သေဘာတရားကို တျဖည္းျဖည္းနားလည္လာၾကသလို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔လဲ ႀကိဳးစားလာၾကပါပီ။ စီးပြားေရးနလန္ထဖို႔လဲ Plan ေတြ ဆြဲကုန္ၾကပါပီ။ ျမန္မာျပည္မွာလဲ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈေတြ အမ်ားႀကီးတိုးလုပ္ႏိုင္ဖို႔႐ွိလာတာရယ္၊ အခုလို ေဆး႐ုံေတြ အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ ေငြေၾကးေတြ ရ႐ွိလာပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ပိုပီး လ်င္ျမန္ေကာင္းမြန္လာေတာ့မွာပါ။ World Bank ကိုလဲ ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။ လိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ေမွ်ာ္ေနတုန္းမွာ ရလာလို႔ ပိုေက်နပ္ရပါတယ္။ Fighting Myanmar.